Kitra-Fifidianana filohan’ny CAF :: Manao ankamantatra ny filatsahankofidiany i Ahmad - ewa.mg
News - Kitra-Fifidianana filohan’ny CAF :: Manao ankamantatra ny filatsahankofidiany i Ahmad
Hanao jery todiky ny zava-bitany nandritra ny fe-potoam-piasany i Ahmad, filohan’ny Kaonfederasiona Afrikanin’ny baolina kitra (CAF), vao hampahafantatra ny firotsahany fanindroany indray amin’ny fikendrena an’io toerana io. « Haka ny hevitr’ireo mpiara-miombon’antoka sy ny ankolafin-kery rehetra ary ireo mpiara-miasa amiko mikasika ny filatsahako ho kandidà aho, raha vantany vao tonga aty amiko ny tatitra momba ireo vita nandritra ny fe-potoam-piasako ”, hoy izy, nandritra ny fivoriana an-tambajotran-tserasera niarahan’ny komity mpanatanteraka ao amin’ny CAF, omaly.
Any Rabat (Maraoka) no hanaovana ny fifidianana ho filohan’ny CAF, amin’ny volana marsa 2021, raha tsy misy fiovana. Manomboka, anio ary haharitra roa volana, ny fametrahana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana.
L’article Kitra-Fifidianana filohan’ny CAF :: Manao ankamantatra ny filatsahankofidiany i Ahmad est apparu en premier sur AoRaha.
Nivoaka tamin'ny : 11/09/2020
Fanajariana ny lakandranon’i Pangalana: ho voavaha ny olan’ny fitaterana any atsinanana
Mampiavaka ny morontsiraka atsinanan’ny Nosy ny lakandranon’i Pangalana, 428 km, avy eo Toamasina hatrany Mananjary. Iankinan’ny toekarena lehibe eo amin’ny sehatry ny fitaterana sy ny fizahantany. Kely sisa izao, ho vita ny asa fanajariana izany lakandrano lehibe izany. Ampolo taona maro tsy nisy fikojakojana ny lakandranon’i Pangalana. Maro ny fihariana nikatso niaraka tamin’izany, indrindra ny fitaterana sy ny fizahantany. Tsy nisy fitohizana ny avy any Mananjary hatrany Toamasina, fitaterana tapatapaka amin’ny lakana madinika ny mampifandray ny fiainan’ny mponina eo amin’ny tanàna mifanakaiky. Manoloana izany, herintaona izao ny APMF (Agence portuaire maritime et fluviale) misahana ny seranana amin’ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy mandray ny asa fanajariana ny lakandranon’ny Pangalana.Kely sisa, ho vita tanteraka ny asa, hamaha ny olana lehibe eo amin’ny fitaterana any amin’ny tapany atsinanan’ny Nosy sy hanome ainga vao ho an’ny fizahantany. Asa fanajariana lehibe ny fanadiovana ireo faritra manentsina ny lakandrano, ny fanalana fotaka ahazoana halalina 1,50 m. Eo anelanelan’i Masomeloka sy Ambalavontaka ny hanaovana io asa goavana io, izay efa eo am-pamaranana azy amin’izao fotoana izao. Faharoa ny fanalana ireo zavamaniry manakana ny lakandrano, efa ao anatin’ny asa famaranana koa izao. Fahatelo ny fanadiovana toerana maromaro, misy 12 (mirefy 100 m na 200 m) hatrany Mananjary. 60 % amin’izany toerana izany no efa voadio ankehitriny.Fizahantany sy kolontsainaMiantoka ny famoaham-bokatra betsaka hita any amin’iny faritra atsinanana iny ny fahavitan’ny lakandrano, toy ny kafe, ny jirofo, ny lavanila. Vokatra fanondrana avokoa ireo ka hahasarika ny mponina hifantoka sy hamokatra bebe kokoa. Hita manamorona ny lakandrano ireo karazan-gidro sy sifaka, ny zavamaniry samihafa, toy ny ravinala, ny rafia, sns. Hamelona indray ny fizahantany sy ny fikarohana samihafa ny fahavitan’ny lakandranon’i Pangalana. Ahitana karazana kolontsaina koa ireo tanàna manamorona azy, ireo mponina tsara fandray sy manome endrika ny kolontsainy amin’ireo asa tanana maro. Eo ihany koa ny sakafo sy ny voankazo.Hampiova ny fari-piainan’ny mponina, hampitombo ny fidiram-bola izany ny fahavitan’io lakandrano io. Irariana ny fitohizan’ny asa fikojakojana, tsy hahatapaka ny fitaterana, hanampy ny tantsaha amin’ny famoaham-bokatra sy hahatongavan’ny mpizahatany. R.MathieuL’article Fanajariana ny lakandranon’i Pangalana: ho voavaha ny olan’ny fitaterana any atsinanana a été récupéré chez Newsmada.
Misy ny takaitra sy ny fiantraikan’ny ady
Hifarana ato ho ato ny ady mivantana amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19? Na izany aza, mbola eo ny takaitran’ny fiantraikan’izany: tsy maintsy atrehina, mila fanarenana. Eo, ohatra, ireo marary efa sitrana tanteraka fa tsy mamindra intsony: mba tsy hisy ny hanilikilika na hanifikifika azy ireny. Samy mivoaka amin’ny ady izao, samy mandresy fa tsy hisy ny hoe sisan’aretina.Misy ny mbola ao anatin’ny fahasarotana. Tsy ireo marary izany rehefa tena mifarana ny ady mivantana fa ireo mitondra takaitra noho ny ady: very asa, nivaro-pananana noho ny tsy fisiana na ny hala-boty nanjaka tetsy sy teroa, niala tsy fidiny tamin’ny fonenana fa tsy nahaloa hofan-trano… Ady tsy vita? Izay no mahatonga ny fangatahana ny fanohizana ny fanampiana.Sanatria, mbola hisy hitondra tsimokaretina amin’izany; eny, rehefa ho vita eo aza ny ady mivantana? Fanararaotana amin’ny fahavoazan’ny hafa: fampiakarana vidin-javatra, fividianana mora ny entan’izay mila vonjy, fandroahana mpiasa tsy amin’ny antony, tsy fanomezana na fampihenana tsy mazava ny karaman’ny mpiasa… Mety ho tsimokaretina avokoa izany?Mbola mila hiadiana ireny rehetra ireny? Raha tiana ny handresy tanteraka ny valanaretina sy ny takaitrany mbamin’ny fiantraikany eo amin’ny tsirairay, tokantrano, fiarahamonina… Eny na eo amin’ny fisainana aza, na ny fomba fiaina, na ny fifandraisana… Samy hivoaka amin’ny ady izao ary samy ho mpandresy. Samy nandalo fotoana sy lalana sarotra izany. Tsy misy tsy sahirana?Tsy ny fisian’ny ady niara-niatrika sy niaina, ohatra, no ndeha hanamarinan-tena amin’izay mitranga sy atao rehetra amina karazana aretina hafa indray: fanararaotana, fanambakana, fandikan-dalàna… Tarazo ratsy avelan’ny ady ireo fa tokony hanova ny fomba fisaina sy fiaina izay ady mafy sy sarotra ary ela niaretana izay. Tsy hitondra fahavoazana hafa indray amin’izao…Ny ady ho vita ihany fa mbola eo ny fanarenana, ny fanonerana, ny fanorenana. Tena mila fifampitsinjovana? Fijoroana, fahavononana, fijerena lavitra…Rafaly Nd.L’article Misy ny takaitra sy ny fiantraikan’ny ady a été récupéré chez Newsmada.
Seho momba ny zaridaina: fihariana iray vitsy mpahafantatra
Fahombiazana ny andro voalohany ny amin’ny fampisehoana momba ny zaridaina, nisokatra ny 23 mey teo ao amin’ny Alliance française Antananarivo, Andavamamba, ary mifarana anio. 1000 mahery ny mpitsidika tamin’io andro voalohany io nizaha ny traikefan’ireo mpamboly zanakazo, mpamboly, mpikojakoja tany ho an’ny fambolena maharitra (permaculture), mpamboly karazam-boninkazo, legioma, na voankazo (horticulture). Samy matihanina amin’ireo sehatra ireo avokoa ny navorin’ny Alliance française ho fanta-bahoaka, satria fihariana iray lehibe nefa vitsy mpahafantatra.Fihariana azo tradrahina tsara, indrindra ho fiatrehana izao fiovan’ny toetr’andro izao. Ankoatra ny maha fambolena azy, eo koa ny varotra fitaovana fampiasa sy kojakoja samihafa. Mandritra io fampisehoana ao amin’ny Alliance française io ny fifanakalozan-kevitra sy fakan-kevitra ho an’izay te hiditra amin’izany sehatra izany. Torolalana iray ny fanatonana ny CTHA (Centre technique horticole d’Antananarivo), eny Ankerana, raha te handalina misimisy kokoa momba izany karazam-boly izany. R.MathieuL’article Seho momba ny zaridaina: fihariana iray vitsy mpahafantatra a été récupéré chez Newsmada.
Nanambara ny tsy fankasitrahany ny fomba noentin’ ny fitondram-panjakana niroso tamin’ny filazana ny fanatanterahana ny fitsapan-kevi-bahoaka amin’ny 27 mey 2019 ho avy izao ny antoko TIM. Nambaran-dRavalomanana Marc, teny Faravohitra, omaly, fa tokony mbola nisy ny fakan-kevitra tamin’ireo mpisehatra politika vao noraisina io fanapahan-kevitra io. L’article Nitady fakan-kevitra est apparu en premier sur AoRaha.
Seraseran’ny CUA, Rabeharisoa T: « Eo amin’ny dingan’ny fanentanana aloha… »
Nitondra fanazavana. «Mbola eo amin’ny dingan’ny fanentanana sy fanofanana aloha isika izao fa tsy mbola any amin’ny sazy. Ilaina ny hahafantaran’ny olom-pirenena mialoha ny fehezam-pitsipika ho an’ny fikoloam-pahasalamana (CMH)», hoy ny talen’ny Serasera eo anivon’ny CUA, Rabeharisoa Tsi­re­sy. Efa an-dalana ny fanofanana ireo mpiasan’ny kaominina hidina ifotony hampahafantatra sy hanentana ny momba izany. Manampy ireo ny fanentanana amin’ireo haino aman-jery, ny fikarakarana adihevitra iarahana amin’ny olom-pirenena sy ny fiarahamonim-pirenena…Nohavaozina hifanaraka amin’ny vanim-potoana ny CMH Notsiahiviny fa tsy vaovao ny CMH. “Efa teo io fa no­hatsaraina sy nohavaozina hifanaraka amin’izao vanim-potoana izao. Zava-dehibe ny fihetsika tsotra, indrindra ny fanajana ny hafa na anatin’ny demokrasia aza isika», hoy ihany izy. Noraisiny ho ohatra amin’izany ny fanaovana fety nefa tokony hotsinjovinasy hajaina ihany ny manodidina amin’ny fotoana efa fatoriana.Fotoana ialana amin’ny fahazaran-dratsy Nohitsiny koa fa tsy tokony ho tonga amin’ny sazy isika. “Tsy misy afa-tsy ny fanajana ny fitsipika ihany. Fotoana izao hamerenana ny fahadiovana ka anisan’ny fitaovana amin’izany ny CMH, hialana amin’ny mety ho fahazaran-dratsy”, hoy izy.Synèse R.L’article Seraseran’ny CUA, Rabeharisoa T: « Eo amin’ny dingan’ny fanentanana aloha… » a été récupéré chez Newsmada.
Tamin’ny lalana azo lazaina ho mahitsy no nifandona mafy ary nifatratra teny an-tanimbary ny taksiborosy Sprinter iray sy Spinter mpitondra entana, teny Amboniriana, Ambatolampy (RN 7), omaly. Olona roa no maty tsy tra-drano, nosokirina tao anatin’ireo fiara, ankoatra ireo mpandeha 10 naratra mafy.Izao sahady àry! Tandrevaka sa olana ara-teknika sy/na tsy fahafehezan-dalana! Vao manomboka misokatra ny lalam-pirenena dia efa loza sahady no miseho. Fiara mpitondra entana niainga avy any Ambositra hihazo aty an-drenivohitra ity nifandona tamin’ny taksiborosy iray zotram-paritra mampitohy an’i Behenjy sy Ambatolampy, araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny zandary ao Ambatolampy. Voalazan’ny zandary fa nandeha mafy ilay fiara mpitondra entana io kanefa nivoaka tao anaty fiviliana mampidi-doza hiditra lala-mahitsy. Tsy fantatra anefa izay nahazo ny mpamily fa nikivilavila be mihitsy ny fandehan’ilay fiara nentiny. Tamin’izay indrindra anefa ity fiara ity no nifanena tamin’ilay taksiborosy zotram-paritra. Niezaka niala ity fiara nivilambilam-pandeha ity ny mpamilin’ilay taksiborosy, saingy nokasohan’ilay fiara ny vatany manontolo. Vokany, nipitika tany an-tanimbaary sady nivadibadika teny am-pianjerana ilay taksiborosy notrongisin’ity fiara namoa-doza ity. Ilay fiara mpitondra entana kosa nikorisa nianjera tany amin’ny ilany ankavia tany amin’ny tevana tokony ho 100 metatra vao tafajanona.Tsy tonga saina ny mpamilin’ilay fiara fitondrana entana…Olona roa indray maty tsy tra-drano tao amin’ilay fiara taksiborosy, lehilahy 40 taona sy 60 taona raha 10 kosa ny naratra mafy ka voatery nentina haingana namonjy ny hopitalin’Ambatolampy. Tsy nisy naninona kosa ny olona niaraka tamin’ilay fiara fitondrana entana fa ilay mpamily no tsy tonga saina fa toy ireny olona lasa adala ireny ny fahitana azy, araka ny fampitam-baovao voaray hatrany. Ny olona teny amin’ny manodidina ny toerana nitrangan’ny loza no nifanome tanana tamin’ny zandary tamin’ny fandefasana ny razana sy ireo naratra nihazo ny hopitaly. Efa any amin’ny tranom-patin’ny hopitalin’Ambatolampy ny fatin’ireo niharam-boina. Nanamafy kosa ny zandary fa miandry ny fahasitranan’ilay mpamily vao afaka manao ny fanadihadiana sy ny famotorana momba ny nahatonga izao loza namoizana ain’olona izao.Raha somary nangingina nandritra ny tsy fisokafan’ny lalana noho fiparitahan’ny covid-19 teo aloha izay, izao sahady dia miverina indray ny lozam-pifamoivoizana.Jean Claude L’article Nivadibadika teny an-tanimbary ireo Sprinter roa nifandona: olona roa maty tsy tra-drano, mpandeha 10 naratra mafy a été récupéré chez Newsmada.